ခိုးစားနေ တဲ့သူတွေ ကို ဘယ် လို ပြုမူဆက်ဆံ သင့်သလဲ? ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲ? – Zartiman
ခိုးစားနေ တဲ့သူတွေ ကို ဘယ် လို ပြုမူဆက်ဆံ သင့်သလဲ? ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲ?
Zar Ti Man | September 27, 2020 | Knowledge | No Comments
အဲဒါကို ခဏတာ စိတ်သာယာမှုကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ကျူးလွန်နေတဲ့သူကိုရော ကျူးလွန်မိအောင် စွဲဆောင်နေတဲ့သူကိုရော အကျိူး လွန်ခံရတဲ့ ဇနီး(သို့မဟုတ်) ခင်ပွန်း ဖြစ်သူက … ကျွန်မတို့မိသားစု ပျိုကွဲအောင် မလုပ်ပါနဲ့လို့…တောင်းပန် နေရတယ် ဆိုတာ မဖြစ်သင့် ပါဘူး။ခိုးစားတဲ့သူကလည်း …ကိုယ်ကလည်း သူများဟာ ခိုးစားနေသေးတယ်၊ အဲဒါကိုတောင် ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိဘဲနဲ့ …”ကိုယ့်လူ ကိုယ် နိုင်အောင်ထိန်းပါ”လို့ ပြောတတ်တာလည်း ကိုယ့်မှာ သိက္ခာတင် မရှိတာ မဟုတ်ဘူး၊ စည်းလည်း မရှိဘူး၊ ယဉ်ကျေးမှုလည်း မရှိဘူး။ တန်ဖိုးလည်း မရှိဘူးဆိုတာကို တုန့်ပြန်လိုက်သလိုပါပဲ။
အဲဒါကြောင့် ခိုးစားနေတဲ့သူတွေကို သွားတွေ့ပြီး တောင်းပန်တာမျိုး၊ ပြောဆိုတာမျိုး လုပ်ခြင်းဟာ အကျိုးမဲ့စေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ကျွန်မအမြင်မှာတော့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်နဲ့ဦးစားဖြေရှင်းရမဲ့ကိစ္စပါ။ ပြီးမှ ခိုးစားတဲ့သူကို ထိရောက်စေမဲ့ နည်း လမ်းနဲ့ဖြေရှင်းရမှာပါ။ဒီကိစ္စက လွယ်မလို့နဲ့ ခက်ခဲ တဲ့ ကိစ္စလို့အများစုကတော့ယူဆကြပါတယ်။ ကျွန်မကတော့အဲဒီလို မယူဆပါဘူး။ ကျွန်မကို မကြာခဏဖုန်းဆက်ပြီး ရင်ဖွင့်ကြတဲ့ ထဲမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဖောက်ပြန်နေလို့။ ဇနီးဖြစ်သူက ဖောက်ပြန်နေလို့…ဆိုပြီး ရင် ဖွင့်ကြတာက ၉ ၀% လောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မိသားစု ပြိုကွဲမှာ စိုးလို့ ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကို တောင်းပန်ပေမဲ့ မရပါဘူး။
စိတ်မသက်သာစွာနဲ့ကြားနေရပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ကိုယ့်မှာ အဲဒီလို ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့၊ အခြားသူတွေ ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ စဉ်းစားလို့ရတာလေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီး မျှဝေချင်ပါတယ်။တကယ်တော့ ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲနဲ့ယူသုံးတာ ခိုး မှုမြှောက်ပါတယ်။ကာမပိုင်ရှိတဲ့ ခင်ပွန်း(သို့မဟုတ်) ဇနီးသည် နဲ့ ငြိစွန်းတာက ဥပဒေအရလည်း ခိုးမှုမြှောက်သလို၊ ဘာသာရေးရှု့ ထောင့်ကနေ ကြည့်ရင်လည်း ဒုသနသော မြောက်တာပါပဲ။ဒါ့အပြင် လူမှုရေးအနေနဲ့ ကြည့်ရင်လည်း တဏှာရာဂကြောင့် မထိန်းသိမ်း နိုင်ဘူးဆိုတာကို လူအများသိအောင် ကြေညာလိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် အင်မတန် သိက္ခာမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်သလို၊
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာရော ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပါ ထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရပ်ပါ။မိသားစုအရေးမှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးတာပါ၊သားသမီးတွေကိုလည်း ဓါးထိုး သတ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီလို မိသားစုအပေါ်မှာ အပြစ်ကြီး ကျူးလွန်ထားတဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စကို ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် စနစ်တကျရှိဖို့နဲ့ဉာဏ်ပညာရှိရှိ ဖြေရှင်းဖို့ လိုပါတယ်။အဲဒီလို အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကို မဖြေရှင်းခင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ပြင်ဆင်ပါလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အ ချိန်မှာ မိသားစုအတွက် အရေးကြိးတဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးမို့ပါ။
အဲဒါကြောင့် ဒေါသဘယ်လောက်ထွက်နေပါစေ၊ စိတ်အေးအောင် တည်ငြိမ်အောင် အရင်ဆုံး ကြိုးစားပါ။ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က တကယ် ဖောက်ပြန်နေခြင်းရှိမရှိ အရင်ဆုံး စစ်ဆေးပါ။ သူ့ကို ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်မေးတာမျိုး မလုပ်ခင်မှာ သေချာအောင် စစ်ပါ။ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) သုံးကြိမ် လောက်ထိ စစ်ဆေးပြီး သေချာပြီဆိုမှ ဒီကိစ္စအတွက် ဘယ်လို ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကို အရင်ဆုံး စဉ်းစားသင့်တာ ပါ။နည်းလမ်း ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ပထမ နည်းလမ်းကတော့(၁) သူ့ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး ဆက်ပေါင်းဖို့နည်းလမ်းပါ။ ကိုယ့်နောက်ကျောကို ဓါးထိုး ထားတဲ့သူကို သနားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပေါင်းဖို့စဉ်းစားတယ် ဆိုရင်တောင်မှ။
တစ်စုံတစ်ရာ တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုခုတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ရှေ့တစ်ဆင့်မတိုးရဲအောင်၊ ဒါမှ မဟုတ် နောင် ဒါမျိုး ထပ်ပြီး မကျူးလွန်ရဲအောင် လုပ်သင့်တာပါ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူး လွယ်လွယ်ကူကုနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူဟာ တွေ့က ရာ မိန်းမနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ဖောက်ပြန်နေမှာပါပဲ။ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သူ မကြာခဏဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်က လက်ခံပေးထား၊ ခွင့် လွှတ်ပေးထားလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် နောင်ကျဉ်အောင် လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ပထမဆုံး လုပ်သင့်တာက သူတို့ ဒီလို ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကိစ္စကို လူ များများသိအောင် လုပ်ပါ။ သူ့မိဘ၊ ကိုယ့်မိဘ နဲ့ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းသိအောင်လုပ်ပါ။
ခိုးစားထားတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းဘက်ကတော့ ဒီလို မလုပ်မိအောင် ကိုယ့်ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ တားပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကို နားမယောင်ပါနဲ့…သတ္တိရှိရှိနဲ့ လူများများသိအောင် လုပ်ပါ။တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ …သူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သူကို စုံစမ်းပါ။ သူ့ကို သွားတွြေ့ပီး ပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကာမပိုင်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့အကြောင်းကို သူ့မိဘ၊ အသိုင်းအဝိုင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေပါ သိအောင် လုပ် ပေးပါ။ ဒါဟာ နာမည်ဖျက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ နာမည်ကတော့ ကျူးလွန်ြ့ပီဆိုကတည်းက ပျက်နေပြီးသားပါ။ဖောက်ပြန်တဲ့သူ အများစုက ခိုးစားနေတဲ့သူတွေက ခိုးစားနေမှန်းသိမှာကို ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီအားနည်းချက်ကို သိထားပြီးအသုံးပြုပါ၊ သူ့ရဲ့အခြား အားနည်းချက်တွေကို ဒီနေရာမှာ အသုံးပြုလို့လည်း ရပါတယ်။အဲဒီလို လုပ်တဲ့အ တွက် ကိုယ့်အနေနဲ့ အရှက်မကွဲပါဘူး။ ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်းမှာပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် သူထပ်ပြီး သူမကျူးလွန်ရဲအောင်ရယ်၊ နောက်တစ်ဆင့် များ တက်လာခဲ့ရင်… ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ…ဆိုတဲ့အဖြေအတွက် ခုလို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသင့်တာပါ။ ဒါကြောင့် သူ တို့ဖောက်ပြန်မှုကို လူများများ သိအောင် လုပ်ရတာပါ။အစိုးရ ဝန်ထမ်း(သို့မဟုတ်) တပ်မတော် ဝန်ထမ်းဆိုရင် သူ့အထက် အရာရှိ ၂ ဆင့်၃ ဆင့် ထိကို တိုင်ထားပါ။ သူတို့ဘက်က တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူအောင်လည်း ကိုယ့်ဘက်က တောင်းဆိုပါ၊ ဖိအားပေးပါ။
အဲဒီ အဆင့်ကနေ တက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ … လူသိများအောင် ထပ်ကြော်ငြာပြီး ကွာရှင်းမယ်၊ ပုဒ်မ ၁၃ နဲ့ အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ အဆင့် ကို ဆက်သွားသင့်ပါတယ်။ ဒီလောက်ထိ ဖြစ်နေပြိ ဆိုရင်တော့…သူ ဟာ ကိုယ့်အတွက် လွှတ်ချသင့်တဲ့သူ ပါပဲ။(၂) ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက် ကို စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့နည်းလမ်းပါ။ကိုယ့်နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ရှိနေရင် အချိန်မရွေး ကိုယ့်ကို စိတ်ရော လူပါ ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ အချစ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ့်အနာဂတ်လောက် အရေးမကြီးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပစ်ချလိုက်တာ ကပိုကောင်းပါတယ်။ပစ်မချခင်မှာ ခွင့်လွှတ်ပြီး ပစ်ချလိုက်ချင်တာလား၊
တစ်ခုခုတော့ မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ပညာပေးပြီးမှ လွှတ်ချမလား စဉ်းစားပါ။အဲဒါတွေ မလုပ်ခင်မှာ ကိုယ့်နောင်ရေးနဲ့ သားသ မီးတွေအတွက် လက်ထပ်ပွား ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကို ကိုယ့်ဘက်ကပဲ အပိုင်ရအောင် လုပ်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ကိုယ့်အတွက် မလို ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့သူလည်း ရှိချင်ရှိပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ကိုယ်က သူ့ကို ပေးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေရှိပါတယ်။ ပျိုရွယ်နုပျိုမှုတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အ နေနဲ့သူ့အပေါ် ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေပြုစုခဲ့ရတာတွေကို တစ်လကို အနည်းဆုံး ၃ သိန်းကနေ ၅သိန်း နှုန်းနဲ့ တွက်ပြီး အိမ်ထောင်သက်နဲ့ မြှောက်ပြီး သူ့ဆီက တောင်းပါ။ဆိုပါတော့ အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်ဆိုရင် ကိုယ့်အနေနဲ့သူ့အတွက် လပေါင်း ၁၂၀ အလုပ်လုပ် ပေးခဲ့တယ်၊
တစ်လကို ၃ သိန်း နှုန်းနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ သိန်းပေါင်း ၃၆၀ ကနေ သိန်း ၆၀၀ လောက်အနည်းဆုံး သူ့ဆီကနေ ရသင့်ပါတယ်။ သား သမီးတွေ မွေးထားခဲ့ရင် အဲဒီကလေးတွေအတွက်ပါ ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေး စရိတ်ပါထည့်ပေါင်းပြီး တောင်းပါ။ ဒီထက်ပိုရရင် အကောင်း ဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက်ပါ။အဲဒီလို တောင်းလို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ နဲ့ တရားစွဲခြင်းအားဖြင့် သူဟာ အချုပ်ကြမယ်၊ ထောင်ဒဏ်ကျမယ်၊ ခိုးစားတဲ့သူလည်း အရှက်ရပါမယ်၊ သူ့ကိုလည်း တရားစွဲနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိရင် စွဲပါ။ဒီလို ရက်စက်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့… သူ ကိုယ့်နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးထားပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ အတွက်လည်း တရားရုံးစရိတ်နဲ့ပိုက်ဆံအများကြီးမကုန်ပါဘူး၊ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်လိုက်ပါ။ အဲဒီအဆင့်နဲ့တင်အောင်မြင်မှု ရနိုင် ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် ပုဒ်မ ၁၃ နဲ့ တရားစွဲပြီး လက်ထပ်ပွားပစ္စည်းတွေကို မိသားစုပိုင်(တစ်နည်း) ကိုယ်ပိုင် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့် လက်တွဲဖော်ဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိဘူး၊ ကိုယ်မှီခိုနိုင်လောက်တဲ့ အရည်အချင်းလည်းမရှိဘူး ခိုးပဲ စားတတ်တာ ဆိုရင်တော့ဘာမှ မယူပါ နဲ့တော့၊ ဒီလို ချီးထုတ်မျိုးကို အခြားသူ ယူသွားတာက ပိုတောင် ကောင်းပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့် ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော် အတွက် စိတ်ညစ်နေတာတွေ ခံစားနေရတာတွေ လျော့ပြီး ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာကို သေချာ စဉ်းစားပါလို့ အကြံ ပြုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဲဒါကို ခဏတာ စိတျသာယာမှုကွောငျ့ လှယျလှယျကူကူ ကြူးလှနျနတေဲ့သူကိုရော ကြူးလှနျမိအောငျ စှဲဆောငျနတေဲ့သူကိုရော အကြိူး လှနျခံရတဲ့ ဇနီး(သို့မဟုတျ) ခငျပှနျး ဖွဈသူက … ကြှနျမတို့မိသားစု ပြိုကှဲအောငျ မလုပျပါနဲ့လို့…တောငျးပနျ နရေတယျ ဆိုတာ မဖွဈသငျ့ ပါဘူး။ခိုးစားတဲ့သူကလညျး …ကိုယျကလညျး သူမြားဟာ ခိုးစားနသေေးတယျ၊ အဲဒါကိုတောငျ ရှကျရကောငျးမှနျးမသိဘဲနဲ့ …”ကိုယျ့လူ ကိုယျ နိုငျအောငျထိနျးပါ”လို့ ပွောတတျတာလညျး ကိုယျ့မှာ သိက်ခာတငျ မရှိတာ မဟုတျဘူး၊ စညျးလညျး မရှိဘူး၊ ယဉျကြေးမှုလညျး မရှိဘူး။ တနျဖိုးလညျး မရှိဘူးဆိုတာကို တုနျ့ပွနျလိုကျသလိုပါပဲ။
အဲဒါကွောငျ့ ခိုးစားနတေဲ့သူတှကေို သှားတှပွေီ့း တောငျးပနျတာမြိုး၊ ပွောဆိုတာမြိုး လုပျခွငျးဟာ အကြိုးမဲ့စတေယျလို့ မွငျမိပါတယျ။ ကြှနျမအမွငျမှာတော့ ဖောကျပွနျနတေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝလကျတှဲဖျောနဲ့ဦးစားဖွရှေငျးရမဲ့ကိစ်စပါ။ ပွီးမှ ခိုးစားတဲ့သူကို ထိရောကျစမေဲ့ နညျး လမျးနဲ့ဖွရှေငျးရမှာပါ။ဒီကိစ်စက လှယျမလို့နဲ့ ခကျခဲ တဲ့ ကိစ်စလို့အမြားစုကတော့ယူဆကွပါတယျ။ ကြှနျမကတော့အဲဒီလို မယူဆပါဘူး။ ကြှနျမကို မကွာခဏဖုနျးဆကျပွီး ရငျဖှငျ့ကွတဲ့ ထဲမှာ ခငျပှနျးဖွဈသူက ဖောကျပွနျနလေို့။ ဇနီးဖွဈသူက ဖောကျပွနျနလေို့…ဆိုပွီး ရငျ ဖှငျ့ကွတာက ၉ ၀% လောကျရှိပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ မိသားစု ပွိုကှဲမှာ စိုးလို့ ကြူးလှနျနတေဲ့သူတှကေို တောငျးပနျပမေဲ့ မရပါဘူး။
စိတျမသကျသာစှာနဲ့ကွားနရေပါတယျ။ကြှနျမအနနေဲ့ကိုယျ့မှာ အဲဒီလို ကိုယျတှေ့ အတှအေ့ကွုံမရှိပမေဲ့၊ အခွားသူတှေ ရဲ့အတှအေ့ကွုံနဲ့ စဉျးစားလို့ရတာလေးတှကေိုတော့ပွနျပွီး မြှဝခေငျြပါတယျ။တကယျတော့ ပိုငျရှငျရှိတဲ့ ပစ်စညျးကို ပိုငျရှငျအသိမပေးဘဲနဲ့ယူသုံးတာ ခိုး မှုမွှောကျပါတယျ။ကာမပိုငျရှိတဲ့ ခငျပှနျး(သို့မဟုတျ) ဇနီးသညျ နဲ့ ငွိစှနျးတာက ဥပဒအေရလညျး ခိုးမှုမွှောကျသလို၊ ဘာသာရေးရှု့ ထောငျ့ကနေ ကွညျ့ရငျလညျး ဒုသနသော မွောကျတာပါပဲ။ဒါ့အပွငျ လူမှုရေးအနနေဲ့ ကွညျ့ရငျလညျး တဏှာရာဂကွောငျ့ မထိနျးသိမျး နိုငျဘူးဆိုတာကို လူအမြားသိအောငျ ကွညောလိုကျတဲ့ကိစ်စဖွဈတဲ့အတှကျ အငျမတနျ သိက်ခာမဲ့တဲ့ လုပျရပျဖွဈသလို၊
လူ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာရော ဆှစေဉျမြိုးဆကျပါ ထိချိုကျစတေဲ့လုပျရပျပါ။မိသားစုအရေးမှာ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျက ဖောကျပွနျတယျဆိုတာ ကိုယျ့နောကျကြောကို ဓါးနဲ့ ထိုးတာပါ၊သားသမီးတှကေိုလညျး ဓါးထိုး သတျလိုကျတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီလို မိသားစုအပျေါမှာ အပွဈကွီး ကြူးလှနျထားတဲ့ သူနဲ့ပတျသကျတဲ့ ကိစ်စကို ကိုယျတှယျဖွရှေငျးနိုငျဖို့အတှကျ စနဈတကရြှိဖို့နဲ့ဉာဏျပညာရှိရှိ ဖွရှေငျးဖို့ လိုပါတယျ။အဲဒီလို အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျမှုကို မဖွရှေငျးခငျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို အရငျဆုံး ကွိုးစားပွီး ပွငျဆငျပါလို့ ဆိုခငျြပါတယျ။ စိတျလှုပျရှားနတေဲ့ အ ခြိနျမှာ မိသားစုအတှကျ အရေးကွိးတဲ့ အလုပျကို မလုပျတာ အကောငျးဆုံးမို့ပါ။
အဲဒါကွောငျ့ ဒေါသဘယျလောကျထှကျနပေါစေ၊ စိတျအေးအောငျ တညျငွိမျအောငျ အရငျဆုံး ကွိုးစားပါ။ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျက တကယျ ဖောကျပွနျနခွေငျးရှိမရှိ အရငျဆုံး စဈဆေးပါ။ သူ့ကို ပါးစပျကနေ ဖှငျ့မေးတာမြိုး မလုပျခငျမှာ သခြောအောငျ စဈပါ။ အနညျးဆုံး နှဈကွိမျ (သို့မဟုတျ) သုံးကွိမျ လောကျထိ စဈဆေးပွီး သခြောပွီဆိုမှ ဒီကိစ်စအတှကျ ဘယျလို ဆောငျရှကျမယျဆိုတာကို အရငျဆုံး စဉျးစားသငျ့တာ ပါ။နညျးလမျး ၂ မြိုးရှိပါတယျ။ပထမ နညျးလမျးကတော့(၁) သူ့ကို ခှငျ့လှတျပွီး ဆကျပေါငျးဖို့နညျးလမျးပါ။ ကိုယျ့နောကျကြောကို ဓါးထိုး ထားတဲ့သူကို သနားလို့ပဲ ဖွဈဖွဈအကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ ဆကျပေါငျးဖို့စဉျးစားတယျ ဆိုရငျတောငျမှ။
တဈစုံတဈရာ တုနျ့ပွနျမှုတဈခုခုတော့ လုပျသငျ့ပါတယျ။ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး နောကျရှတေ့ဈဆငျ့မတိုးရဲအောငျ၊ ဒါမှ မဟုတျ နောငျ ဒါမြိုး ထပျပွီး မကြူးလှနျရဲအောငျ လုပျသငျ့တာပါ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတျဘူး လှယျလှယျကူကုနဲ့ ခှငျ့လှတျပေးလျိုကျမယျဆိုရငျတော့ သူဟာ တှကေ့ ရာ မိနျးမနဲ့ အကွိမျကွိမျဖောကျပွနျနမှောပါပဲ။ဖောကျပွနျတတျတဲ့သူ မကွာခဏဖောကျပွနျတယျဆိုတာ ကိုယျက လကျခံပေးထား၊ ခှငျ့ လှတျပေးထားလို့ပါ။ အဲဒါကွောငျ့ နောငျကဉျြအောငျ လုပျဖို့ လိုပါတယျ။ပထမဆုံး လုပျသငျ့တာက သူတို့ ဒီလို ဖောကျပွနျနတေဲ့ကိစ်စကို လူ မြားမြားသိအောငျ လုပျပါ။ သူ့မိဘ၊ ကိုယျ့မိဘ နဲ့ဆှမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျးသိအောငျလုပျပါ။
ခိုးစားထားတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးဘကျကတော့ ဒီလို မလုပျမိအောငျ ကိုယျ့ကို နညျးလမျးမြိုးစုံနဲ့ တားပါလိမျ့မယျ၊ အဲဒါကို နားမယောငျပါနဲ့…သတ်တိရှိရှိနဲ့ လူမြားမြားသိအောငျ လုပျပါ။တဈပွိုငျနကျတညျးမှာပဲ …သူနဲ့ဖောကျပွနျတဲ့သူကို စုံစမျးပါ။ သူ့ကို သှားတှွေ့ပီး ပွောဆိုတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ သူဟာ ကိုယျ့ရဲ့ကာမပိုငျနဲ့ ဖောကျပွနျနတေဲ့အကွောငျးကို သူ့မိဘ၊ အသိုငျးအဝိုငျး၊ လုပျဖျောကိုငျဘကျတှပေါ သိအောငျ လုပျ ပေးပါ။ ဒါဟာ နာမညျဖကျြတာမဟုတျပါဘူး။ နာမညျကတော့ ကြူးလှနျွ့ပီဆိုကတညျးက ပကျြနပွေီးသားပါ။ဖောကျပွနျတဲ့သူ အမြားစုက ခိုးစားနတေဲ့သူတှကေ ခိုးစားနမှေနျးသိမှာကို ကွောကျတတျကွပါတယျ။
အဲဒီအားနညျးခကျြကို သိထားပွီးအသုံးပွုပါ၊ သူ့ရဲ့အခွား အားနညျးခကျြတှကေို ဒီနရောမှာ အသုံးပွုလို့လညျး ရပါတယျ။အဲဒီလို လုပျတဲ့အ တှကျ ကိုယျ့အနနေဲ့ အရှကျမကှဲပါဘူး။ ခုရှုပျမှ နောငျရှငျးမှာပါ။ နောကျတဈကွိမျ သူထပျပွီး သူမကြူးလှနျရဲအောငျရယျ၊ နောကျတဈဆငျ့ မြား တကျလာခဲ့ရငျ… ကိုယျ့အနနေဲ့ ဘယျလို ဖွရှေငျးရမလဲ…ဆိုတဲ့အဖွအေတှကျ ခုလို ကွိုတငျကာကှယျထားသငျ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ သူ တို့ဖောကျပွနျမှုကို လူမြားမြား သိအောငျ လုပျရတာပါ။အစိုးရ ဝနျထမျး(သို့မဟုတျ) တပျမတျော ဝနျထမျးဆိုရငျ သူ့အထကျ အရာရှိ ၂ ဆငျ့၃ ဆငျ့ ထိကို တိုငျထားပါ။ သူတို့ဘကျက တဈစုံတဈရာ အရေးယူအောငျလညျး ကိုယျ့ဘကျက တောငျးဆိုပါ၊ ဖိအားပေးပါ။
အဲဒီ အဆငျ့ကနေ တကျကွတယျဆိုရငျတော့ … လူသိမြားအောငျ ထပျကွျောငွာပွီး ကှာရှငျးမယျ၊ ပုဒျမ ၁၃ နဲ့ အရေးယူမယျဆိုတဲ့ အဆငျ့ ကို ဆကျသှားသငျ့ပါတယျ။ ဒီလောကျထိ ဖွဈနပွေိ ဆိုရငျတော့…သူ ဟာ ကိုယျ့အတှကျ လှတျခသြငျ့တဲ့သူ ပါပဲ။(၂) ကိုယျ့အိမျထောငျဘကျ ကို စှနျ့ပဈလိုကျတဲ့နညျးလမျးပါ။ကိုယျ့နောကျကြောကို ဓါးနဲ့ ထိုးတဲ့သူဟာ ကိုယျ့ဘေးနားမှာ ရှိနရေငျ အခြိနျမရှေး ကိုယျ့ကို စိတျရော လူပါ ဒုက်ခပေးနိုငျတယျဆိုတာကို သတိပွုပါ။ အခဈြဆိုတာ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ ကိုယျ့အနာဂတျလောကျ အရေးမကွီးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ပဈခလြိုကျတာ ကပိုကောငျးပါတယျ။ပဈမခခြငျမှာ ခှငျ့လှတျပွီး ပဈခလြိုကျခငျြတာလား၊
တဈခုခုတော့ မှတျလောကျသားလောကျအောငျ ပညာပေးပွီးမှ လှတျခမြလား စဉျးစားပါ။အဲဒါတှေ မလုပျခငျမှာ ကိုယျ့နောငျရေးနဲ့ သားသ မီးတှအေတှကျ လကျထပျပှား ပိုငျဆိုငျမှုမြားအားလုံးကို ကိုယျ့ဘကျကပဲ အပိုငျရအောငျ လုပျပါလို့အကွံပွုခငျြပါတယျ။ကိုယျ့အတှကျ မလို ဘူးလို့ပွောခငျြတဲ့သူလညျး ရှိခငျြရှိပါလိမျ့မယျ၊ ဒါပမေဲ့ကိုယျက သူ့ကို ပေးခဲ့ရတဲ့ အခြိနျတှရှေိပါတယျ။ ပြိုရှယျနုပြိုမှုတှရှေိပါတယျ။ ကိုယျ့အ နနေဲ့သူ့အပျေါ ပေးဆပျခဲ့ရတာတှပွေုစုခဲ့ရတာတှကေို တဈလကို အနညျးဆုံး ၃ သိနျးကနေ ၅သိနျး နှုနျးနဲ့ တှကျပွီး အိမျထောငျသကျနဲ့ မွှောကျပွီး သူ့ဆီက တောငျးပါ။ဆိုပါတော့ အိမျထောငျသကျ ၁၀နှဈဆိုရငျ ကိုယျ့အနနေဲ့သူ့အတှကျ လပေါငျး ၁၂၀ အလုပျလုပျ ပေးခဲ့တယျ၊
တဈလကို ၃ သိနျး နှုနျးနဲ့ဆိုတော့ ကိုယျ့အနနေဲ့ သိနျးပေါငျး ၃၆၀ ကနေ သိနျး ၆၀၀ လောကျအနညျးဆုံး သူ့ဆီကနေ ရသငျ့ပါတယျ။ သား သမီးတှေ မှေးထားခဲ့ရငျ အဲဒီကလေးတှအေတှကျပါ ပညာရေးနဲ့ကနျြးမာရေး စရိတျပါထညျ့ပေါငျးပွီး တောငျးပါ။ ဒီထကျပိုရရငျ အကောငျး ဆုံးပါပဲ။ ကိုယျ့အနာဂတျအတှကျပါ။အဲဒီလို တောငျးလို့မပေးနိုငျဘူးဆိုရငျတဈလငျတဈမယားစနဈကငျြ့သုံးခွငျးဆိုငျရာ ဥပဒေ ပုဒျမ ၁၃ နဲ့ တရားစှဲခွငျးအားဖွငျ့ သူဟာ အခြုပျကွမယျ၊ ထောငျဒဏျကမြယျ၊ ခိုးစားတဲ့သူလညျး အရှကျရပါမယျ၊ သူ့ကိုလညျး တရားစှဲနိုငျတဲ့ အနအေထားရှိရငျ စှဲပါ။ဒီလို ရကျစကျတယျလို့ မထငျပါနဲ့… သူ ကိုယျ့နောကျကြောကို ဓါးနဲ့ ထိုးထားပါတယျ။
ဒီလိုလုပျဖို့ အတှကျလညျး တရားရုံးစရိတျနဲ့ပိုကျဆံအမြားကွီးမကုနျပါဘူး၊ ရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့လိုကျပါ။ အဲဒီအဆငျ့နဲ့တငျအောငျမွငျမှု ရနိုငျ ပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ ပုဒျမ ၁၃ နဲ့ တရားစှဲပွီး လကျထပျပှားပစ်စညျးတှကေို မိသားစုပိုငျ(တဈနညျး) ကိုယျပိုငျ ပွုလုပျလို့ရပါတယျ။ ကိုယျ့ လကျတှဲဖျောဟာ ပိုငျဆိုငျမှုလညျးမရှိဘူး၊ ကိုယျမှီခိုနိုငျလောကျတဲ့ အရညျအခငျြးလညျးမရှိဘူး ခိုးပဲ စားတတျတာ ဆိုရငျတော့ဘာမှ မယူပါ နဲ့တော့၊ ဒီလို ခြီးထုတျမြိုးကို အခွားသူ ယူသှားတာက ပိုတောငျ ကောငျးပါသေးတယျ။အဲဒါကွောငျ့ ဖောကျပွနျတတျတဲ့ ဘဝလကျတှဲဖျော အတှကျ စိတျညဈနတောတှေ ခံစားနရေတာတှေ လြော့ပွီး ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလို ကိုငျတှယျမလဲ ဆိုတာကို သခြော စဉျးစားပါလို့ အကွံ ပွုခငျြပါတယျ။ကြေးဇူးတငျပါတယျ။